Global Aawaj | ६ करोडको विरोध गर्ने कि शासकीय प्रणाली फेर्ने ? ६ करोडको विरोध गर्ने कि शासकीय प्रणाली फेर्ने ?
२३ जेष्ठ २०७६ 2:17 pm
आर्थिक रूपले कमजोर समुदाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगारजस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समुदायहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हामीले बढाउनुपर्नेछ । उनीहरूको उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्नेछ । त्यसकारण, हाम्रो बजेट विभिन्न समुदाय, क्षेत्रमा जाँदा पक्कै पनि वितरणमुखीजस्तो देखिन्छ । र, त्यो आवश्यकता हो । हामी जब उत्पादनलाई जोड दिन्छौं, राष्ट्रिय क्षमतालाई बढाउँछौं, तब वितरण पनि सही ढंगले हुनेछ । त्यसकारण, यसमा उत्पादन र वितरणको सन्तुलित प्रस्ताव यो बजेटमार्फत प्रस्तुत भएको छ ।
हालै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा प्रस्तुत स्थानीय पूर्वाधार साझेदारका कार्यक्रमबारे धेरै बहस भएको छ । कतिपय सांसदहरूले आफंैले यसको विरोध गरेको पनि सुनिएको छ । सांसदहरूको नेतृत्वमा तल गएको ६ करोड रुपैया सांसदहरूले आफंैले चलाउने होइन । त्यसमा आर्थिक हिसाबले सांसदको नेतृत्व हुँदैन, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ । तर पनि यसमा यति धेरै टिप्पणी किन भइराखेको छ ? दुनियाँमा संसदीय प्रजातन्त्र भएका मुलुकहरू भारतले अहिले पनि आठ करोड नेपाली रुपैयाँ सांसदहरूमार्फत खर्च गर्न छुट्याउँछ । अस्टेलिया, बेलायत लगायतका धेरै मुलुकले छुट्ट्याएका छन् । अहिले हामीले अपनाएको शासनकीय प्रणालीमा सांसदहरू प्रत्यक्ष रुपमा विकास निर्माणका कामसँग जोडिएका हुन्छन् ।
हामीले आगामी समृद्धिको वर्ष हुने भनेका छौं । अघिल्लो वर्ष मूलतः हामीले संघीयताको जग बसाउने, आर्थिक समृद्धिको जग बसाउने कानुनहरूको व्यवस्थापनलगायत संरचनागत व्यवस्थापनमा समय खर्च गर्नुपर्यो भन्दै आयौं ।
आगामी वर्ष द्रुत आर्थिक समृद्धिको वर्ष हुनेछ भनेर घोषणा गरिएको छ । यो बजेटमा त्यो कुरालाई ध्यान दिँदै ठूलाठूला पूर्वाधारको क्षेत्रमा परिणाममुखी हुने ढंगले, अतिपय आगामी वर्ष सम्पन्न हुने ढंगले बजेट विनियोजन गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । यसले दक्षिण सीमासम्म जोडिएका तराई मधेस क्षेत्रका जनसमुदायको आर्थिक र सामाजिक स्तरलाई माथि उठाउनेछ । मध्यपहाडी लोकमार्गले पहाडी भेगको जनसमुदायको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई माथि उठाउनेछ । र, त्यो क्षेत्रका जनताको व्यावसायिक क्षमतालाई माथि उठाउनेछ । हाम्रो जीवन पद्धतिका रूपमा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विकास गर्न जुन ढंगले बजेट विनियोजन गरेको छ, यसले पूर्वाधारको विकासमा फड्को मार्नेछ ।
वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ ऊर्जाका निम्ति विदेश पठाएका छौं । ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदा एकातिर त्यो पैसा रोकिनेछ भने अर्कातिर हाम्रोे पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई कम गर्नेछ । यसले हाम्रो वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलन गर्न महत्वपूर्णभूमिका खेल्नेछ ।
आगामी वर्ष हामीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत ठूला पूर्वाधारका काम सम्पन्न गर्दै छौं । र, त्यसका निम्ति बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी, ऊर्जाको क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोसीलगायत कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न भई आगामी वर्ष झन्डै एक हजार मेगावाट बिजुली हाम्रो केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने कुरा उल्लेख भएको छ । यसले स्वाभाविक हिसाबले नेपालको अन्य क्षेत्रलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । त्यो मात्र होइन, आज हामीले भारतसँग ऊर्जा आयात गरिराखेका छौं र त्यसबापत झन्डै वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ ऊर्जाका निम्ति विदेश पठाएका छौं । ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदा एकातिर त्यो पैसा रोकिनेछ भने अर्कातिर हाम्रोे पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई कम गर्नेछ । यसले हाम्रो वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलन गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यस अर्थमा जसरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा, ठूला आयोजनाहरूमा ध्यान दिइएको छ, यो आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
हामीलाई थाहा छ, हाम्रो देशको मुख्य कनेक्टिभिटी आज पनि सडक यातायात नै हो । आजको पुस्ताका लागि कनेक्टिभिटीको मुख्य आधार भनेको सडक, बिजुली, पर्यटन क्षेत्र हुन् । पानीजहाज, रेल–वेजस्ता कुराहरू आउने पुस्ताका लागि ज्यादा महत्वपूर्ण कुरा हुन् । त्यसैले सडकलगायत पूर्वाधारमा जुन ढंगले उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको छ, यसले आगामी वर्ष हाम्रो आर्थिक उन्नतिमा सकारात्मक संकेत देखा पार्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यो बजेटले लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणलाई स्थापित गरेको छ । मानिसहरू भनिरहेका छन्, यो बजेट छरपस्ट रूपमा आयो । म भन्न चाहन्छु, हाम्रोजस्तो मुलुक जहाँ अहिले पनि ठूलो जनसंख्याको हिस्सा गरिबीको रेखामुनि छ, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अहिले पनि मध्यम वर्गमा छ । जसले आफै केहि गर्न सक्दैन, आफैं आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैन ।
वर्गीय हिसाबले, सामाजिक हिसाबले लामो समयदेखि विभेदमा पारिएका÷परेका समुदायको ठूलो हिस्सा छ । जनसंख्याका हिसाबले ५० प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि चेतनाका हिसाबले पछाडि परेको महिला समुदाय छ । यस्ता समुदायलाई मूलधारमा नल्याईकन राज्यको समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । केही मानिस मात्र धनी भएर मुलुक धनी हुँदैन । के गर्दा आममानिस कमसेकम गरिखानेगरी आफ्नो खुट्टामा आफंै उभिन सक्छन् भन्नेमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । जसलाई हामीले सामाजिक क्षेत्र भनेका छौं । यसमा पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । आर्थिक रूपले कमजोर समुदाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगारजस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समुदायहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हामीले बढाउनुपर्नेछ । उनीहरूको उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्नेछ । त्यसकारण, हाम्रो बजेट विभिन्न समुदाय, क्षेत्रमा जाँदा पक्कै पनि वितरणमुखीजस्तो देखिन्छ । र, त्यो आवश्यकता हो । हामी जब उत्पादनलाई जोड दिन्छौं, राष्ट्रिय क्षमतालाई बढाउँछौं, तब वितरण पनि सही ढंगले हुनेछ । त्यसकारण, यसमा उत्पादन र वितरणको सन्तुलित प्रस्ताव यो बजेटमार्फत प्रस्तुत भएको छ ।
त्यस्तै, अर्को एउटा गम्भीर बहस हामीले हाम्रो नेपाली समाजमा गर्नुपर्ने छ । त्यो हो, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड अर्थात् जनसांख्यिक लाभ । आज हाम्रो जनसंख्याले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी टेवा दिन्छ ? मुलुकको विकासमा कसरी टेवा दिन्छ ? यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव कस्तो छ ? आज नेपाल जनसंख्याको लाभका हिसाबले सबैभन्दा चरम सकारात्मक बिन्दुमा आइपुगेको छ । यसलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्नुपर्ने छ । अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत ५ लाख रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । यदि त्यो गर्न सकियो भने यो जनसांख्यिक लाभले नेपाललाई माथि उठाउन सक्छ । यो लाभ सधैं रहँदैन । जनसंख्याको अनुकूलता सधैं रहँदैन । यो क्रमशः प्रतिकूलतामा परिणत हँुदै जान्छ । नेपालमा सन् १९९२ देखि २०४७ सम्म झन्डै ५५ वर्ष जनसांख्यिक अनुकूलता छ । त्यसमा हामीले आधाजति समय बिताइसकेका छौं । याने आधा समयमा हामीले यसलाई उपयोग गर्न सकेनौं । हामी राजनीतिक समस्याकै समाधानमा बढी लाग्यौं । अब हामीसँग झन्डै २७ वर्ष यो जनसांख्यिक लाभको समय छ । २७ वर्ष छँदै छ भनेर हामीले २५ वर्ष पुगेपछि काम थाल्यौं भने हुँदैन । कमसेकम आउने १० वर्षपछि यो जनसांख्यिक लाभ अर्को चरणमा प्रवेश गर्छ । त्यसैले, नेपाल बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्ने समय भनेको आउने १० वर्ष हो । त्यसकारण यो १० वर्ष हाम्रा निम्ति ज्यादा महत्वपूर्णछ । जापानले सन् १९३० देखि १९९२ सम्म त्यो जनसांख्यिक लाभको उपयोग ग¥यो । चीनले सन् १९६८ देखि २०१२ सम्म, कोरियाले सन् १९६७ देखि २०१६ सम्म त्यसको उपयोग गर्यो ।
-योगेश भट्टराई / साभार